ktmkhabar.com - एमालेको महाधिवेशन भाडिने संकेत, भीम रावलले आजै चाले कडा कदम !
एमालेको महाधिवेशन भाडिने संकेत, भीम रावलले आजै चाले कडा कदम !
नेकपा एमालेको आसन्न १० औँ महाधिवेशन भाड्ने षडयन्त्र शुरु भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष रावल पक्षले कैलाली क्षेत्र नं २ मा समानान्तर ढंगले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने तयारी गरेको हो ।
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य एवम् लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईँले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने बताएका हुन्।
बुधबार १० बजे महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि लागि भनेर भेला बोलाएको बजगाईँले उल्लेख गरेका छन्। ‘मंसिर १०(१२ गतेसम्म चितवनमा हुन गइरहेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कैलाली क्षेत्र नं।२ बाट ६ पुरूष र ३ महिला गरि जम्मा ९ जना प्रतिनिधि छनोट गर्न देहायको मिति, समय र स्थानमा कैलाली क्षेत्र नं।२ का सम्पूर्ण संगठित सदस्यको भेला आयोजना गरि छनोट गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा रहेका हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण संगठित सदस्य कमरेडले यसै सूचनालाई आधार मानी उपस्थित भइदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, बजगाईँले सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना राखेका छन्।
यस्तै उता नेकपा एमाले अछामले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि १५ जना प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । कार्यदलले अछामको दुईवटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र समग्र जिल्लालाई आधार बनाएर दलित तथा समावेसी क्षेत्रबाट गरेर प्रतिनिधि छनोट गरेको हो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट छ जना छनोट गरिएका छन् भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट आठ जना छनोट भएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट खुलातर्फबाट कृष्णप्रसाद जैसी, हर्कबहादुर कुँवर (गोविन्द), प्रकाश शाह, भरत अयडी, डिबी साउद, महिलातर्फ पशुपति कुँवर, दुधकला विष्ट प्रतिनिधिमा छनोट भएका छन् ।
दलित समावेशीतर्फ रामबहादुर आउजी र राधिका भुजेललाई छनोट गरिएको छन् । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ खुलातर्फ यज्ञबहादुर बोगटी, बमबहादुर विसी, भरत साउद, शिवप्रसाद उपाध्याय, भिम जनाला, सर्वसहमतिबाट प्रतिनिधि छनोट गरिएको नेकपा एमाले अछामले जानकारी दिएको छ ।